बेल्जियम बाट बेलायतको लागि कार आयात गर्दै | मेरो कार आयात
के तपाई आफ्नो कार बेल्जियम बाट युनाइटेड किंगडम आयात गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ?
हाम्रो उद्धरणहरू पूर्ण समावेशी छन् र तपाईंको आवश्यकतामा पूर्ण रूपमा आधारित छन्। तपाईं यस पृष्ठ मार्फत यसमा तपाईंको कारको आयात प्रक्रियाको बारेमा अधिक जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, तर सम्पर्कमा हुन र स्टाफको सदस्यसँग बोल्न हिचकिचाउँनुहोस्।
युनाइटेड किंगडममा तपाईंको कार पुग्दै
हामी रसदमा विशेषज्ञ हौं र तपाईको कार बेल्जियमबाट युनाइटेड किंगडमबाट सुरक्षित रूपमा प्राप्त गर्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छौं।
यदि तपाईंको कार पहिले नै यूनाइटेड किंगडममा छ भने हामी तपाईंको टाढाको कार रेजिष्टर गर्न सक्दछौं - वा तपाईं आवश्यक कार्यहरू सम्पन्न गर्नको लागि यसलाई हाम्रो परिसरमा लैजान सक्नुहुनेछ। जे होस्, यदि तपाईंलाई युनाइटेड किंगडममा तपाईंको गाडीको यातायात आवश्यक छ भने त्यहाँ धेरै फरक यातायात विधिहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ।
तपाईंको आवश्यकतामा निर्भर गर्दै, कार आन्तरिक पोर्टमा ल्याउन सकिन्छ, वा कार ट्रान्सपोर्टरमा सम्पूर्ण मार्गमा ढुवानी गर्न सकिन्छ। हाम्रो कार रसद समाधानहरू तपाइँको कार मा bespoke हो, त्यसैले सम्पर्कमा रहनुहोस् ताकि हामी तपाइँको आवश्यकताहरु राम्रोसँग बुझ्न सक्दछौं।
बेल्जियमबाट तपाईको कार आयात गर्न तपाईले कति कर तिर्नु पर्छ?
बेल्जियमबाट बेलायतमा कार आयात गर्दा यो गर्न सम्भव छ वास्तवमा कुनै कर तिरेको बिना। अनुमति छ कि कार दुबै months महिना भन्दा पुरानो हो र नयाँबाट 6००० किलोमिटर कभर छ। HMRC को नजरमा कुनै पनि कमलाई नयाँ कारको रूपमा लिइन्छ, त्यसैले तपाईले VAT भुक्तान गर्नुपर्नेछ - यद्यपि प्राय जसो केसहरूमा फिर्ता दावी गर्न सकिन्छ।
नयाँ वा लगभग नयाँ कार आयात गर्दा, भ्याट यूकेमा तिर्नै पर्छ त्यसैले कृपया तपाईंको योजनाको सन्दर्भमा हामीलाई कुनै पनि प्रश्नहरू चलाउन नहिचकिचाउनुहोस्। आयात करहरू खरीद गर्नु भन्दा पहिले।
बेल्जियम कार संशोधन र प्रकार अनुमोदन
बेल्जियमबाट १० बर्ष भन्दा कम उमेरका कारहरूको लागि, तिनीहरूले युके प्रकारको अनुमोदनको पालना गर्न आवश्यक छ। हामी या त यो प्रक्रिया पारस्परिक मान्यता भनिन्छ वा मार्फत गर्न सक्छौं IVA परीक्षण.
हामी तपाईको तर्फबाट सम्पूर्ण प्रक्रिया ब्यबस्थित गर्दछौं कि कि त्यो तपाईको कारको निर्माता वा हो यातायात विभाग को homologation टीम को साथ व्यवहार गर्दै छ, ताकि तपाई ज्ञान मा आराम गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाई संग कानूनी रूपमा दर्ता हुनेछ। DVLA सबैभन्दा कम समयमा सम्भव छ।
बेल्जियमबाट बाँया ह्यान्ड ड्राइभ कारहरूलाई केही परिमार्जनहरू आवाश्यक हुनेछ, जसमा हेडलाइट बान्कीमा ती आउने ट्राफिकको चमक नलगाउन, स्पीडो प्रति घण्टा पढ्ने माईल प्रदर्शन गर्न र पछाड कुहिर प्रकाश यदि यो पहिले नै सर्वव्यापी रूपमा अनुरूप छैन भने।
हामीले आयात गरेका कारका मेक र मोडेलहरूको विस्तृत सूची तयार पारिसकेका छौं। त्यसोभए तपाईंलाई आफ्नो व्यक्तिगत कारले के चाहिन्छ भनेर द्रुत लागत अनुमान दिन सक्दछौं।
दश बर्ष भन्दा पुरानो कार
हामी पूर्ण बेल्जियम कार आयात सेवा प्रस्ताव गर्दछौं
बेल्जियम कारका प्रकारहरू
जेड बेलायतमा कार परीक्षण र रेजिष्ट्रेसन सबमिशनमा विशेषज्ञ हुन्।
हाम्रो कार युकेमा ल्याउन र आवश्यक प्रबन्धहरू पूरा गर्न राम्रो कामका लागि धन्यवाद छ। हामी सकेसम्म धेरै दुबई ग्राहकहरु तपाइँको बाटो पठाउन प्रयास गर्नेछौं।